Inqugwala sinombuki zindwendwe onguKamil
I-cottage "Leśny Zakątek" ibekwe kwi "promontory" ebonakalisa indalo yendawo, iqhubela phambili ehlathini, kwaye ijikelezwe yimijelo. Isibonelelo siphela sigubungela indawo yee-ares ezingama-30 kwaye inamacandelo amabini - igadi yeziqhamo kunye nehlathi. Igadi yeziqhamo ibekwe phezulu kwiploti kwaye inika isiqhamo esihle ngexesha eliphezulu, ngelixa uhamba usiya ehlathini yindlwana ngokwayo. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba nangona sivakalelwa kukuba sikwindawo ekude epheleleyo, sisese-4 km ukusuka kwisixeko. ukusuka kwimarike.
Ukuya ngasendlwini, kwicala lasekhohlo sinedama elidala, ecaleni kwayo indawo yokuhlala yebarbecue enegrill yezitena. Kuyafaneleka ukukhankanya ukuba kukho ipaki yemoto yangasese ecaleni kwendlu, kwaye ngaphantsi kukho indawo yokuphumla kunye nehlathi labucala kunye nomlilo. Le ndawo inomlingo ngokupheleleyo, enye yohlobo oluthile.
Ukujikeleza kwe-hut akuqhelekanga, kuba nangona uya kuziva apha njengokungathi usekupheleni kwehlabathi, kwindawo ekude ngaphandle kwayo nayiphi na impucuko, kwangaxeshanye, emva kokufowuna, unokufikelela ngokukhawuleza. wena pizza, ukutya China okanye naliphi na isitya iphupha evela zokutyela Dębica, ngenxa yokuba usoloko ungafumana uya kuba kwisixeko Dębica. Izilwanyana zasekhaya, ezininzi kakhulu ziya kukunika amathuba amaninzi okubona iintlobo ezingaqhelekanga zezilwanyana, ngelixa uqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo, kuba indawo ye-30 ares ejikeleze i-cottage ibiyelwe ngokupheleleyo. Kukwafanelekile ukukhankanya i-flora esijikelezileyo, kuba i-hut yakhiwe kwindawo eyathi yahlanganiswa yiprogram ye-Natura 2000 kamva, eqinisekisa ukungafani kwale ndawo. Kubathandi bokuhamba kwehlathi, zombini ilizwe elinqumlayo kunye neendlela ezichongiweyo, kukho iikhilomitha ezininzi zeendlela, kwaye kuyafaneleka ukuthatha ibhasikidi kunye nawe, kuba ubuninzi bamakhowa ngexesha lonyaka bukhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Kamil